Maitiro ekudzimisa autocorrect mu macOS | Ndinobva mac
Maitiro ekudzima autocorrect mu macOS
Iyo chaiyo inogadziriswa inouya natively yakamisikidzwa pane ese mashandiro masisitimu chishandiso chakanakisa iri basa rekumhanyisa girama uye / kana zviperengo zvikanganiso zvatingaite kana tichinyora chinyorwa. Kunyangwe chiri chokwadi kuti chishandiso chakanakisa, nguva nenguva chinoita zvimwe zvakashata isu tisingazvione.
Kana tichigara tichishandisa mazwi mune mimwe mitauro, mazita echigadzirwa, kana zvakajairika kana tichiwanzo nyora pamusoro penyaya dzakananga, zvinonyanya kuita kuti mazwi mazhinji asimo muduramazwi, kana akafanana nechero rimwe, fanano inozoisa macOS kushanda kutsiva iro rakati izwi kana mazwi.
Neraki, ese masisitimu anoshanda anotibvumidza kudzimisa iyo isina kugadziriswa, kuitira kuti patinomanikidzwa kushandisa chaiyo terminology, iyo macOS yekutarisa, usakanganisa basa redu. Asi tisati taimisa, tinofanirwa kufunga, kwatinenge tichinyora gwaro kana kwatinoda kuti iyo inogadziriswa igadzikiswe, nekuti kana tichizonyora muMicrosoft Word, chishandiso ichi chine kwayo kwakazvimiririra, saka bvisa iyo chizvarwa cheMacOS, hazvimise Shoko rimwe kushanda.
Kana tangojekesa nezvechikumbiro chatichazonyora uye kana tisingade iyo yekugadzirisa kuti itange kuita chinhu chayo, tinofanira enderera seinotevera:
Dzima Autocorrect muMacOS
Kutanga tinoenda kuSystem Preferences, kungave kuburikidza nemenu pane yepamusoro bar yeMac yedu, kana kuburikidza neSpotlight nekunyora zvido zvesystem.
Tevere tinoenda kuKhibhodi uyezve kuMavara.
Isu tinotsvaga sarudzo Ruramisa chiperengo otomatiki uye regedza bhokisi.
Nekusatamisa bhokisi iri, autocorrect inomira kushanda uye haizoiswe mukushanda zvakare kunze kwekunge taita nhanho idzi zvakare uye nekumisa bhokisi ratakambomisa zvekare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekudzima autocorrect mu macOS
Chengeta ako ekushandisa akagadziridzwa neMacUpdater
Maitiro ekugadzirisa kunyorera kweApple kubva kuMac yako kuburikidza iTunes